१७१८.४९ विन्दुमा पुगेर बन्द भयो बजार, ४ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढीको कारोबार हुदाँ नेपाल पुनर्बीमाको सबैभन्दा बढी
कात्तिक २७, काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन बिहीवार १ हजार ७१८ दशमलव ४९ अंकमा नेप्से परिसूचक बन्द भएको छ ।
आइतवारदेखि निरन्तर बढेर बजार यो दिन पनि १० दशमलव ८२ अंकले बजार बढेको हो । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार १ हजार ६३६ दशमलव १७ विन्दुमा बन्द भएको बजार यो साता ८२ दशमलव ३२ अंक माथि उक्लिएको हो ।
यो दिन १९८ ओटा कम्पनीको ४९ हजार ११७ पटकको व्यापारमा रू. ४ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख ८६ हजार बराबरको १ करोड ३८ लाख ८९ हजार १८९ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २८ करोड ५५ लाख ५ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ९८३ पुगेको छ ।
बिहीवार पनि व्यापारिक समुहको परिसूचक सर्वाधिक ९ दशमलव ९८ प्रतिशत बढेको छ । सर्वाधिक परिसूचक बढेको व्यापारिक समुह अन्तर्गतका दुई ओटा कम्पनी विशाल बजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयरमूल्य बिहीवार सर्वाधिक बढेको छ ।
विशाल बजार कम्पनीको ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २ हजार ७५२ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको पनि ९ दशमलव ९९ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५ हजार ९८९ पुगेको हो । यस दिन विशाल बजार कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. २५० ले र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको प्रतिकित्ता रू. ५४४ ले बढेको हो ।
दोहोरो अंकले बढेको बजारमा बिहीवार १०२ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । यो दिन गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयरमूल्य सर्वाधिक ५ दशमलव २३ प्रतिशतले घटेको छ । यस दिन उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ८३४ कायम भएको हो ।
बिहीवार कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये होटलको शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव २१ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ९ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत र जीवन बीमाको शून्य दशमलव २८ प्रतिशतले परिसूचक घटेको छ ।
यस दिन व्यापारिक समुहसँगै बैंकिङको शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत, अन्यको २ दशमलव २६ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले परिसूचक बढेको छ ।